ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း – Gentleman Magazine
စာရေးဆရာမ Elizabeth Gilbert ဟာ သူမရဲ့ ဘဝ အချိန်တွေ တော်တော်များများကို ခရီးသွားရင်း၊ သတင်းပို့ရင်း၊ သူ့ရဲ့ တီထွင်ဉာဏ်ကို ဖော်ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ပါ။ ဒီမှာ သူ့မိဘတွေက သူ့ကို ဘယ်လို ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ဆိုတာ သူက ပြန်ပြောပြထားပါတယ်။
၁. သူတို့ဟာ မွေးနေ့တွေကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မပျော်ခိုင်းပါဘူး
နှစ်တိုင်းမှာ ကျွန်မမိဘတွေက မွေးနေ့ရောက်ရင် လက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့ အတူ တာဝန်ယူမှု တစ်ခုပါ ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ တာဝန်ယူမှုက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလဲ ကြိုစဉ်းစားထားပါတယ်။ ကျွန်မ အသက် ၉ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ကျွန်မမိဘတွေက ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရုပ်ရည်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး တာဝန်မယူတော့ပါဘူး။ ကျွန်မ ခေါင်းမလျှော်ချင်ရင်၊ ကျောင်းကို အဝတ်ဟောင်းတွေပဲ ပြန်ဝတ်သွားရင် သူတို့ ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး။ အဲဒါ ကျွန်မ တာဝန်ယူမှုပါ တဲ့။
အသက် ၉ နှစ်နဲ့ပဲ ပြီးမသွားပါဘူး။ ကျွန်မအမေက ကျွန်မအခန်းနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဘာမှ လုပ်မပေးတော့တဲ့ မွေးနေ့ကိုလဲ ကြုံရဖူးပါတယ်။ ဝက်သိုက်ဖြစ်ရင် ဖြစ်ပစေ သူတို့ ဘာမှ မပြောပါဘူး။ ကျွန်မ ကိုယ့်ဘာသာ ရှင်းချင်မှ ရှင်းပါ တဲ့။
အဲဒီလိုနဲ့ အသက် ၁၁၊ ၁၂ လောက်မှာ ကိုယ့်အဝတ် ကိုယ်လျှော်တတ်နေပါပြီ။ အထက်တန်းကျောင်းရောက်တော့ ကိုယ်တိုင် အဝတ်အစား ဝယ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ဆင်တတ်နေပါပြီ။ အဲဒီလိုနဲ့ အကုန် လုပ်တတ်လာတာပါပဲ။
၂. အကြွေးကြောက်စိတ်ကို ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်
ကျွန်မ အဖေက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ် အရမ်း ရှိသူပါ။ သူ့အတွက် သူ့မိသားစုဟာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု ရှိဖို့ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ် တဲ့။ အကြွေးကင်းတဲ့ ဘဝဟာ သူ့အတွက် ပျော်စရာကြီးပါ။ အဲဒီ အချိန်၊ ငယ်သေးတုန်းကတော့ ကျွန်မက သူ နည်းနည်းများနေပြီ ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြွေးကင်းတာဟာ ကျွန်မဘဝကို သူများတွေထက် ပိုပြီး သန်မာအောင် လုပ်ပေးခဲ့တာတော့ ကျွန်မ ထည့်ပြောရပါမယ်။ အဲဒါဟာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိပြီး ကျွန်မကြိုက်တဲ့ ဝါသနာတွေကို ကိုယ်တိုင် ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၃. ဘယ်လို ချွေတာရမလဲ သင်ပေးခဲ့ပါတယ်
ကျွန်မဖေဖေ ပြောခဲ့တာ ” များများသိလေ၊ နည်းနည်းလိုလေ” ပါ။ အဲဒီ စကားပုံလေးကို ကျွန်မ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ကောလိပ်ပြီးတဲ့ အချိန်ကျ ကျွန်မမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ဘယ်လို ဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာ သိနေခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်လို တစ်ယောက်ထဲ ခရီးတွေ သွားရမလဲဆိုတာ သိတော့ ကျွန်မစိတ်ကြိုက် အလုပ်တွေကို ပုံမှန်လူတွေနဲ့ မတူပဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြသနာတွေ ရှိပေမယ့် အရမ်း လူမိုက်ဆန်တဲ့ ပြသနာတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဖိနပ်တစ်ရံကို ဒေါ်လာ ၅၀၀ နဲ့ ဝယ်မဲ့အစား ခြောက်လလောက် ငွေစုပြီး ဥရောပကို သွားတာမျိုး ကျွန်မ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၄. ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ကျွန်မကို ဥပေက္ခာ ပြုထားလိုက်ပါတယ်
ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ကျွန်မ သူတိုိ့ကို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့က လုံးလုံးကို ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဥပေက္ခာ ပြုထားတာပါ။ အခုချိန် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ သူတို့မှန်နေပါတယ်။ ကျွန်မဟာ သူတို့ရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်မှုတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်အဖြစ် အရွယ်ရောက်မလာသေးပါဘူး။ သူတို့ဟာလဲ အဲဒါကို သိနေလို့ ကျွန်မ ပိုရင့်ကျက်ဖို့ နှင်ထုတ်လိုက်တာပါ။
ကျွန်မဟာ သူတို့ ကျွန်မအပေါ် ယုံကြည်မှု အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရှိတာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သိတာ နောက်တစ်ခုကတော့ သူတို့ဟာ ဘယ်လို လူကြီး လုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ သူတွေအဖြစ် ပြုစုပျိုးထောင်မိမှာ ကြောက်နေတာပါ။ သူတို့ဟာ အဲဒီလို လူမျိုးတွေကို မြင်ဖူးကြပြီး သူတို့ရဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ဘယ်လို လူကြီး လုပ်ရမှန်း မသိမှာကို ကျွန်မ မပျော်မှာထက် ပိုကြောက်ကြတာပါ။
စာရေးဆရာမ Elizabeth Gilbert ဟာ သူမရဲ့ ဘဝ အခြိနျတှေ တျောတျောမြားမြားကို ခရီးသှားရငျး၊ သတငျးပို့ရငျး၊ သူ့ရဲ့ တီထှငျဉာဏျကို ဖျောထုတျပွနိုငျဖို့ ရုနျးကနျရငျး ကုနျဆုံးခဲ့တဲ့ အောငျမွငျတဲ့ စာရေးဆရာမတဈယောကျပါ။ ဒီမှာ သူ့မိဘတှကေ သူ့ကို ဘယျလို ပွုစုပြိုးထောငျခဲ့ဆိုတာ သူက ပွနျပွောပွထားပါတယျ။
၁. သူတို့ဟာ မှေးနတှေ့ကေို ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး မပြျောခိုငျးပါဘူး
နှဈတိုငျးမှာ ကြှနျမမိဘတှကေ မှေးနရေ့ောကျရငျ လကျဆောငျတဈခုနဲ့ အတူ တာဝနျယူမှု တဈခုပါ ပေးတတျပါတယျ။ အဲဒီ တာဝနျယူမှုက ဘာဖွဈမလဲဆိုတာလဲ ကွိုစဉျးစားထားပါတယျ။ ကြှနျမ အသကျ ၉ နှဈပွညျ့ မှေးနမှေ့ာ ကြှနျမမိဘတှကေ ကြှနျမရဲ့ ကိုယျပိုငျ ရုပျရညျနဲ့ ပါတျသတျပွီး တာဝနျမယူတော့ပါဘူး။ ကြှနျမ ခေါငျးမလြှျောခငျြရငျ၊ ကြောငျးကို အဝတျဟောငျးတှပေဲ ပွနျဝတျသှားရငျ သူတို့ ဘာမှ မပွောတော့ပါဘူး။ အဲဒါ ကြှနျမ တာဝနျယူမှုပါ တဲ့။
အသကျ ၉ နှဈနဲ့ပဲ ပွီးမသှားပါဘူး။ ကြှနျမအမကေ ကြှနျမအခနျးနဲ့ ပါတျသတျပွီး ဘာမှ လုပျမပေးတော့တဲ့ မှေးနကေို့လဲ ကွုံရဖူးပါတယျ။ ဝကျသိုကျဖွဈရငျ ဖွဈပစေ သူတို့ ဘာမှ မပွောပါဘူး။ ကြှနျမ ကိုယျ့ဘာသာ ရှငျးခငျြမှ ရှငျးပါ တဲ့။
အဲဒီလိုနဲ့ အသကျ ၁၁၊ ၁၂ လောကျမှာ ကိုယျ့အဝတျ ကိုယျလြှျောတတျနပေါပွီ။ အထကျတနျးကြောငျးရောကျတော့ ကိုယျတိုငျ အဝတျအစား ဝယျပွီး ကိုယျ့ဘာသာ ဆငျတတျနပေါပွီ။ အဲဒီလိုနဲ့ အကုနျ လုပျတတျလာတာပါပဲ။
၂. အကွှေးကွောကျစိတျကို ထညျ့ပေးခဲ့ပါတယျ
ကြှနျမ အဖကေ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးစိတျ အရမျး ရှိသူပါ။ သူ့အတှကျ သူ့မိသားစုဟာ ငှကွေေးဆိုငျရာ လှတျလပျမှု ရှိဖို့ အရမျး အရေးကွီးပါတယျ တဲ့။ အကွှေးကငျးတဲ့ ဘဝဟာ သူ့အတှကျ ပြျောစရာကွီးပါ။ အဲဒီ အခြိနျ၊ ငယျသေးတုနျးကတော့ ကြှနျမက သူ နညျးနညျးမြားနပွေီ ထငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အကွှေးကငျးတာဟာ ကြှနျမဘဝကို သူမြားတှထေကျ ပိုပွီး သနျမာအောငျ လုပျပေးခဲ့တာတော့ ကြှနျမ ထညျ့ပွောရပါမယျ။ အဲဒါဟာ လှတျလှတျလပျလပျ ရှိပွီး ကြှနျမကွိုကျတဲ့ ဝါသနာတှကေို ကိုယျတိုငျ ဖမျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၃. ဘယျလို ခြှတောရမလဲ သငျပေးခဲ့ပါတယျ
ကြှနျမဖဖေေ ပွောခဲ့တာ ” မြားမြားသိလေ၊ နညျးနညျးလိုလေ” ပါ။ အဲဒီ စကားပုံလေးကို ကြှနျမ အရမျးကွိုကျပါတယျ။ ကောလိပျပွီးတဲ့ အခြိနျကြ ကြှနျမမှာ ကိုယျ့ဘာသာ ဘယျလို ဂရုစိုကျရမလဲဆိုတာ သိနခေဲ့ပါပွီ။ ဘယျလို တဈယောကျထဲ ခရီးတှေ သှားရမလဲဆိုတာ သိတော့ ကြှနျမစိတျကွိုကျ အလုပျတှကေို ပုံမှနျလူတှနေဲ့ မတူပဲ လုပျကိုငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွသနာတှေ ရှိပမေယျ့ အရမျး လူမိုကျဆနျတဲ့ ပွသနာတှေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဖိနပျတဈရံကို ဒျေါလာ ၅၀၀ နဲ့ ဝယျမဲ့အစား ခွောကျလလောကျ ငှစေုပွီး ဥရောပကို သှားတာမြိုး ကြှနျမ လုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၄. ပွီးတော့ သူတို့ဟာ ကြှနျမကို ဥပက်ေခာ ပွုထားလိုကျပါတယျ
ဒီကိစ်စနဲ့ ပါတျသတျပွီး ကြှနျမ သူတို့ကို ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ သူတို့က လုံးလုံးကို ဂရုမစိုကျပါဘူး။ ဥပက်ေခာ ပွုထားတာပါ။ အခုခြိနျ ပွနျစဉျးစားကွညျ့တော့ သူတို့မှနျနပေါတယျ။ ကြှနျမဟာ သူတို့ရဲ့ ပွုစုပြိုးထောငျမှုတှအေတှကျ လုံလောကျတဲ့ လူကွီးတဈယောကျအဖွဈ အရှယျရောကျမလာသေးပါဘူး။ သူတို့ဟာလဲ အဲဒါကို သိနလေို့ ကြှနျမ ပိုရငျ့ကကျြဖို့ နှငျထုတျလိုကျတာပါ။
ကြှနျမဟာ သူတို့ ကြှနျမအပျေါ ယုံကွညျမှု အတိုငျးအတာ တဈခုအထိ ရှိတာသိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမ သိတာ နောကျတဈခုကတော့ သူတို့ဟာ ဘယျလို လူကွီး လုပျရမှနျး မသိတဲ့ သူတှအေဖွဈ ပွုစုပြိုးထောငျမိမှာ ကွောကျနတောပါ။ သူတို့ဟာ အဲဒီလို လူမြိုးတှကေို မွငျဖူးကွပွီး သူတို့ရဲ့ ကလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ကြှနျမ ဘယျလို လူကွီး လုပျရမှနျး မသိမှာကို ကြှနျမ မပြျောမှာထကျ ပိုကွောကျကွတာပါ။
Previous: ချစ်သူလန်းလန်းလေးတွေကို လက်တွဲထားကြသူတွေရဲ့ နည်းလမ်းများ
Next: ခြေထောက်အနေအထားနဲ့ မိန်းကလေးတို့၏ စိတ်နေစိတ်ထား